01 Nov, 2019 - 00:11	 2019-10-31T17:12:56+00:00 2019-11-01T00:00:35+00:00 0 Views
VETISHAMWARIDZANE makandigonera, ndakatoroorwa ndave kubika mumba mangu saka vaifona pa0773 985 245 chiregai henyu.
Makasimba here? Ndiri murume ane makore 30 nemwana 1. Ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 20 kusvika 28 ane mwana 1 kana asina. Ngaave akazvipira kuenda kunoongororwa ropa, ndogara muHarare uye kumusha ndekwaRusape. Nhare yangu 0713 232 574, asi vakadzi vevanhu nevanoda zvekutamba musafone henyu.
Makadii? Ndotsvagawo mukadzi anoda kuvaka musha, ndaneta nematsotsi. Ngaave nemakore 35 zvichidzika, ini ndine 39. Andifarira ndobatika pa0713 813 931.
Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 33 nevana vaviri, ndotsvagawo murume ane makore 35 kusvika 40 ane vana vakewo vaviri kana vatatu. Andifarira ngaandibate pa0771 543 360.
Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 42, ndinotsvagawo murume wekufambidzana naye ane makore 43 kusvika 49 asiri pamushonga. Nhare dzangu dzinoti 0714 365 053.
Chiregai henyu kufona pa0773985245 ndakamuwana, ndotenda veTishamwaridzane
Makadii veKwayedza? Ndodawo mukadzi wekuroora, ndine makore 25. Kana pane andifarira ngaandibate pa0774 558 898. Ndinoda kana ane mwana 1 ari kuda kuroorwa nhasi chaiye.
Ndoda musikana ane makore 18 – 27 asina mwana anoenda kuchechi. Ndine makore 34 uye handina kumboroora. Nhamba dzangu 0718 502 810. Ndinoda anoda kugara kumaruwa anotya Mwari.
Ini ndiri mudzimai ane makore 28 ekuberekwa, ndinotsvagawo murume ari serious ave kuda zvekuroora. Ndine vana 2, ndinoda akasununguka kuenda kunotesitiwa. Nhare yangu 0714 900 312.
Ndiri murume ane makore 28 nemwana 1, HIV negative uye ndodawo musikana kana mudzimai ane mwana 1. Ngaave nemakore 18 – 25 ane mazirudo uye anotya Mwari. Nhamba dzangu 0776 524 483.
Ndiri murume ane makore 42, ndinoda mukadzi wekuchengetana naye ari pamushonga ane makore 37. Ndinogara papurazi, nhamba dzangu 0737 531 388.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 30, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 20 kusvika 27 asiri pamushonga. Andifarira nhamba dzangu 0786 315 015.
Makadii zvenyu veKwayedza? Makaita basa, ndakamuwana wandaida saka vese vaifona pa0786 705 548 ngavachirega zvavo.
Makadii veTishamwaridzane? Ini ndiri mukomana ane makore 22 ekuberekwa, ndinotsvagao musikana wekushamwaridzana naye. Ngaave ane makore 18 kusvika 20, andifarira ngaandibate panhamba dzinoti 0777 618 280. Ndingafara mukashambadzawo tsamba yangu, ndatenda.
Kwayedza, ndinotsvagawo musikana ane makore 25 zvichikwira asina mwana kana kumboroorwa. Ngaave anopinda chechi yechipositori kana Zion. Ini ndine makore 37, ndiri muHarare. Nhare yangu 0719 287 106.
Ndiri murume ane makore 32, ndinodawo mudzimai ane makore 30 zvichidzika asiri pamushonga. Andifarirawo ndobatika p0786 642 949.
Ini ndiri murume ane makore 34 ndotsvaga musikana wekuroora ane makore 20 kusvika 30. Ndorarama nehurema uye ndakaita kosi yohudzidzisi. Nhamba yangu 0783 242 554.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 28, ndinotsvagawo shamwarirume yekuwadzana nayo. Ndinoda ane makore 38 kusvika 40. Ndine mwana 1, nhare yangu 0784 255 156.
Makadii Kwayedza? Ndakafirwa nemukadzi zvino ndiri kuda ane makore 45 – 55 anonamata Johane Masowe weChishanu. Makore angu 58. Foni dzangu 0773 484 310.
Ndiri murume ane makore 38 uye ndine vana vatatu. Ndiri kutsvagawo mudzimai wekuroora, anonamata ari pakati pemakore 25 -32. Ndibatei pa0773 948 895 titaure.
Ndiri murume ane makore 34 ndotsvaga mukadzi ane makore 20 – 25 ari HIV- uye ari serious anokudza Jehovha. Nhamba dzangu 0773 435 321.
Ndiri murume ane makore 30 ndinotsvakawo mudzimai ane makore 23 kusvika 27 ane mwana 1 kana 2. Zvizhinji tozotaura pa0774 484 358.
Hie, ndiri kudawo mudzimai wekuwana ndine mwana wangu 1 uye ndinoda ari pachokwadi. Andida ngaandibate apo 0774 792 487. Zvakawanda totaura ipapo, ndatenda.
Makadii veTishamwaridzane? Ndinotsvakawo musikana anoda zvekuroorwa. Ngaave ane makore 18 – 23, ini ndine 24. Anondibata pa0774 815 541.
Makadii Kwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 22 nemwana 1, ndodawo murume ane makore 26 kusvika 33. Andida ngaandibate pa0782 779 573.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 27, ndodawo musikana ane makore 18 kusvika 27.
Anoda zvemba chero anoshanda ndomuda. Andida anondibata pa0771 772 873.